‘केकीजी हुनुहुन्छ, धेरै मजा आयो’ – Mero Film
श्रीधर पौडेल – भारतबाट ३ वर्षे नाटक कोर्स पढेर आएपछि म जनकपुरमा एउटा नाट्य कला परिषदमा एक्टर डाइरेक्टरका रुपमा काम गर्न थालेँ । त्यसपछि इटहरीमा न्यु वर्ल्डमा ड्रामा राइटरका रुपमा काम गरेँ । अरुतिर पनि काम गर्दै थिएँ । नेपाली फिचर फिल्म ‘बाह्र नेपाली एक चिहान’ का साथै रेडियो ड्रामाहरु पनि गर्दै थिएँ । त्योभन्दा अगाडि भोजपुरी फिल्म गरेको थिएँ । तर मेरो इन्ट्रेस्ट फिल्ममा भन्दा बढी नाटकमा थियो । एन्टेना फाउन्डेसनमा काम पाएँ, नाटकमा ।
‘चंखे शंखे पंखे’ मा बसन्त नेपालीले एसिस्ट गर्नुभएको थियो । मलाई देख्नुभएको रहेछ । अनि एउटा मधेसतिरको क्यारेक्टर चाहियो भन्दा मेरो कुरा आएछ । अनि मलाई बोलाउनुभो । मलाई देखेर सुदर्शन थापालाई ज्वरो आएको थियो । बोलाउन त बोलाएँ तर भ्याउँछ त उसले ? गर्न सक्छ ? भन्ने सोचेर । चार दिन भनेको, एक हप्ता नै बस्नुपर्‍यो । एकचोटि कस्ट्युम लगाउनुस् भन्नुभयो । मैले कस्ट्युम लगाउँदा उहाँ एकदम खुसी हुनुभो । मन्त्रीको कस्ट्युम लगाएपछि क्यामेरा म्यान झन् खुसी । त्यसपछि बल्ल उहाँले अलि विश्वास गर्नुभयो । तीनवटा सिन अझै थप्नुभयो ।
अहिले भर्खर रामकहानीको फेसबुकमा फोटो पनि हालेको थिएँ मैले । पोखराभन्दा ४ घन्टामाथि गएको थिएँ, हाम्रो सुटिङ सकिएपछि । हामी हिँड्दै रोकिँदै अघि बढिरहेका थियौं । बाटोमा कतै माग्ने बुढोको फ्यान छ, कहीँ दयाहाङको । नजिक आएपछि सेल्फी लिऊँ शेरबहादुर भन्छ । म एकदमै खुसी भएँ कि म पहाडमा पनि रहिछु भनेर । फोटो खिच्नेबित्तिकै फेसबुकमा हाल्नुको मतलब म कति खुसी थिएँ भन्ने थाहा हुन्छ । मधेसी र पहाडी जुन भनाइ छ, त्यो जनतामा छैन । राजनीति गर्नेले मात्रै फरक पारिदिन्छ । कहिल्यै नगएको ठाउँमा, अलरेडी दुइटा ठूला स्टार हँुदासमेत मलाई यस्तो सम्मान नि ? म खुसीले तनाबमा थिएँ ।
जब म नेपाल कमर्स क्याम्पसमा आएँ । स्कुलमा नि म धेरै मजाक गर्ने गर्थेँ । कतिले भन्ने गर्थेँ कि यो कलाकार हो भनेर । शुक्रबार स्कुलमा गीत, अभिनयको कार्यक्रम हुन्थ्यो । सुरुमा गीत गाउँथेँ । अभिनय देखाउने ठाउँ थिएन । रुची चैँ थियो । कालिकास्थानमा अरुणकुमार झाले अडियो निकाल्नुभएको थियो, महाकवि विद्यापति सिरिअलको । त्यो समय महेन्द्रकुमार मिश्र राष्ट्रिय सभामा सचेतक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कोठा चैँ गइरहन्थेँ । कुरै कुरामा उहाँले मलाई तँ यहाँ बस्ने भए कलाकारिता गर्, कलाकार टाइपको छस्, मैथिली सिरियलको अडिसन छ, त्यहाँ जा भन्नुभो । अनि पत्ता लगाएर गएँ । नाम निकालेँ अनि जनकपुरमा सुटिङ भयो । राम्रो रोल पाएँ । त्यसपछि एउटा एड खेलेँ । संगीतकला नाट्य परिषदबारे अरुणजीले भन्नुभयो । पत्ता लगाए आउनजान थालेँ । १२ क्लास क्लियर भएपछि जनकपुर गएँ ।
२०७५ वैशाख १० गते १०:०६ मा प्रकाशित